Izitayela Zokusika Izinwele Ezithandwayo Zamantombazane - Izinwele
k. m. beamol
Ukuthola isivuno esisha njalo kuhlale kungumqondo omuhle. Abanye baba nomuzwa wokuthi ubude bubalulekile futhi ngakho-ke bavame ukugwema ukugunda izinwele, kodwa leyo nto akufanele ize ngisho ngoba ukusika okuvamile kuqinisekisa nje ukuthi izinwele zakho ziphilile futhi zisesimweni esihle, kungakhathalekile ukuthi zinde noma zimfushane.
Cabanga ngakho, uma izinwele zakho ziphakathi nobude obuphakathi futhi ufuna ukuthi zikhule zibe zinde ukuze zibukeke zizinhle kakhulu, kufanele usike emaphethelweni wokuhlukanisa okungenani njalo ezinyangeni ezimbili kuya kwezintathu. Uma ungakwenzi, ukuphela okuhlukanisiwe kungahle kube kubi futhi nobude obulwele isikhathi eside kangaka ukuba bakhule buzokwehla ngokubukeka kukuncane. Akukhona lokho obukade ukuyo, okwamanje, bekunjalo? Ngokufanayo, uma ufuna ukukhula nge-bob noma i-pixie cut, ukugwema ukugunda izinwele okujwayelekile kungashiya izinwele zakho zibukeka zingenasimo, mhlawumbe kuzodingeka ugqoke isigqoko isikhathi sakho esiningi.
Izitayela zokusika izinwele zamantombazane zithuthukile futhi zenzelwe ukwenza okuhle kakhulu ngomhlwenga wakho. Uma uthanda izinwele ezimfushane noma nithande izingidi zenu ezinde, kukhona okuthize ngamunye wenu. Ngemuva kwakho konke, uma usuyazi imfihlo yokukhiya okuhle okunempilo kusho ukuvuselela ukusika kwakho-ke obengeke afune ukuzitika kwezinye Izitayela zokusika izinwele ze-chic on-trend ezithandwa ngamanye ama-celebs ashisa kakhulu.
1. I-Priyanka Chopra Jonas 'Mid Length Shag Haircut
ezimbili. Izendlalelo ezi-V-Shaped zikaHailey Baldwin Beiber
3. Isinyathelo SikaKriti Sanon Sika Izinhlaka Ezinweleni Zamahlombe
Isine. U-Selena Gomez 'Layered Bob Haircut
5. I-One Length Lob ka-Anushka Sharma
6. Kaia Gerber's One Length Bob Cut With Choppy Ends
7. I-Layered Lob ka-Deepika Padukone
8. Izinwele Zezinwele zikaCami Mendes
9. I-Wispy Textured Mid ubude bezinwele zika-Alia Bhatt
10. I-Long Layered Cut kaDisha Patani
ishumi nanye. Ama-FAQ wezitayela zokusika izinwele
Priyanka chopra UJonas 'Mid Length Shag Haircut
Lokhu ukugunda izinwele shag kancane kancane yaba yinto enkulu ngemuva kokuba isukile emigwaqeni yezindiza eya esitayeleni somgwaqo entshonalanga futhi ekugcineni emhlabeni jikelele ngo-2020. Kusike ukuthi kusetshenziswa izingqimba eziningi ezihlukaniswe ngokulinganayo ngamasu ahlukahlukene okuthumela umbhalo kulo lonke ubude bezinwele zakho ukuze unokuthungwa kwe-avant garde okungabhalwa njenge-grungy noma njengowesifazane.
Ithiphu: Lokhu kusikwa kunenguqulo yohlobo ngalunye lwezinwele nobude bezinwele ngalunye.
Izendlalelo ezi-V-Shaped zikaHailey Baldwin Beiber
Indlela yokusika izinwele yobude obuphakathi nendawo lapho unemikhawulo ye-wispy futhi ilawulwa khona ukuthungwa okungamatshe kubude bakho bonke. Inqubo yokugunda izinwele ifaka ngokufanayo ukwakha isimo esikhangayo.
Ithiphu: Khetha lokhu kusika uma unezinwele ezi-frizzy noma ezijiyile njengoba kususa isisindo esiningi ngenkathi kugcinwa ubude.
Isinyathelo SikaKriti Sanon Sika Izinhlaka Ezinweleni Zamahlombe
Inqubo yokusika izinyathelo idala izingqimba ezihlehlayo ezibukeka njengezinyathelo. I- izingqimba zalokhu kusika qala kusuka noma ngaphansi kwamathambo we-cheekbones ngomphumela ofiseleka kakhulu wobuso.
Ithiphu: Lokhu kusika kuzothambisa izici zalabo abanemihlathi eqinile.
U-Selena Gomez 'Layered Bob Haircut
Ilungele i- ubuso obuyindilinga amajamo noma noma ngubani ofuna ukuzama isitayela esifushane kepha nje akanaso isiqiniseko. Lokhu kugunda izinwele kulula ukuphatha futhi kugcina isimo esihle.
Ithiphu: Indawo yokuhlala kulokhu okusikiwe uma ufuna ukwenza ushintsho olubushelelezi kusuka ku-pixie kusika izinwele ezinde .
U-Anushka Sharma ’ILob Length eyodwa
Le ulayini obukhali i-lob cut eqondile yinhle kakhulu kulabo abanezinwele eziqondile. Ihlanzekile, i-chic nemfashini phambili. Ngaphezu kwalokho, lokhu kubukeka kungakwenza ubukeke ubusha futhi kusebenza kahle ezindaweni ezingahlelekile.
indlela yokukhulisa izinwele ngokushesha emakhambi asekhaya eviki
Ithiphu: Zama lokhu kusika ukuqala ibhizinisi elisha empilweni. Kuzokwenza kukwenze uzizwe usemfashinini ngesimo sengqondo sentombazane engumphathi.
Kaia Gerber's One Length Bob Cut With Choppy Ends
Esinye isitayela se-chic esihle kulabo abathanda ukuzama ngendlela esezingeni eliphezulu. Kukhanya futhi kusha. I- ukuphela okunamandla amanani alungile nje wokuthungwa owadingayo.
Ithiphu: Sebenzisa le ndlela yokugunda izinwele uqonde ku-wavy noma ezinwele ezimnene.
U-Deepika Padukone ’Ubulembu Obuhlelekile
Ngokukhulisa i-bob yakho emfushane noma ukufaka i-spin eqabulayo ezingalweni zakho ezinde, le bob egqinsiwe ilungile futhi iyahlukahluka. Isebenza kahle ezinhlotsheni eziningi zezinwele ezisukela kokuqonde kuye kwezisontekile.
Ithiphu: Khetha izendlalelo ze-wispy uma izinwele zakho zikhulu.
Izinwele Zezinwele zikaCami Mendes
Izendlalelo ezinamaphiko athambile ziyangeza ukuma ezinweleni ezinde ngendlela efana nenganekwane. Imisipha ethambile bumba ubuso bakho bese ugoqa amahlombe akho ngendlela eyehlayo yakha ama-collarbones akho nokuma kwakho jikelele.
Ithiphu: Ungajabulela ukuthungwa kwakho kwemvelo ngalokhu kusika.
Alia Bhatt I-Wispy Textured Izinwele eziphakathi nendawo
Lapha inqubo yokusika izinwele yenziwa ngendlela engeza ivolumu kumane ngaphandle kokukhombisa izingqimba ezisobala. Kuyisitayela esihle uma ufuna ukubukisa ngamalokhi abukeka enempilo agcwele.
I-Long Layered Cut kaDisha Patani
Kulabo kini abane izinwele ezinde ezinhle futhi ungathanda ukuyigcina, vele usike imana yakho bese uzinikeze izingqimba ezinde. Kwandisa kuphela ubude bakho ngokususa isisindo esengeziwe ukuze indawo yakho yomqhele ingathambeki.
yeka ukulahleka kwezinwele nezinwele ezikhulayo
Ithiphu: Gcina imiphetho yokuhlukanisa ingenzeki ngokugcoba imikhawulo ngoyela kakhukhunathi ngaphambi kokugeza.
Ama-FAQ wezitayela zokusika izinwele
U. Ungazibona kanjani izinwele ezifanele zezinwele zami?
TO. Bheka imana yakho bese uqonde ukuthi yini ongathanda ukuyishintsha ngayo. Uma izinwele zakho zibukeka zixhugele udinga ukuthungwa, uma izinwele zakho zincane udinga i-trim futhi uma izinwele zakho zi-frizzy udinga ukusikwa okuzokwengeza isisindo futhi kulawule isimo.
U. Ungamchazela kanjani umlungisi wezinwele ngokusika engikufunayo?
TO. Okokuqala, kufanele uvumele umlobi wezinhlamvu ukuthi ahlole izinwele zakho bese umtshela izinkinga zakho zezinwele nokuthi yini ofuna ukuyenza ngakho. Bese ume ulalele okushiwo yilochwepheshe. Bazokutshela ukuthi okufunayo kungenzeka yini noma cha noma ukuthi yini abangayenza kangcono ukuze izinwele zakho zibukeke kahle. Ukuba nengxoxo enempilo no-stylist wakho ngaphambi kokusika kufanele.
U. Kufanele ngihlele kangaki ukugunda izinwele?
TO. Kuya ngezici eziningi ukukhomba nokusetha isheduli yakho ephelele yokugunda izinwele. Udinga ukubheka ukwakheka kwezinwele zakho, ukuthi kuthatha isikhathi eside kangakanani ukukhula, ukuthi ukuphela kokuqhekeka kuvela ngokushesha kangakanani nokuthi yini ukugunda izinwele kwakho kwamanje nokuthi ufuna izinwele zakho zibukeke kanjani ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Kukhona ukuyekethisa okuthile okuza nezinwele ezintsha kuwe. Uma ufushane kufanele uqonde ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi ukhule ikakhulukazi uma unezinwele ezisontekile. Futhi-ke ufanele ukuqonda ukwakheka kaningi kuyadingeka. Ngakho-ke uma usubheke zonke lezo zinto, lokho kungakusiza ufinyelele esiphethweni esisebenzayo futhi uqhubeke naso.
Funda futhi: Izesekeli Zezinwele Okudingeka Uzibenazo Ukuze Ube Nesitayela Esiyisitayela Sangempela
ukuthi ungamisa kanjani ukuwa kwezinwele futhi uvuselele izinwele ngokwemvelo ekhaya
amathiphu okukhula kwezinwele
izindlela zemvelo zokumisa ukulahleka kwezinwele
amakhambi asekhaya emibimbi yamehlo
ulamula kanye ne-curd ye-dandruff